उपप्रमुख कविता विष्टको वार्षिक मोबाइल खर्च ७२ हजार ! | समाचार
September 21, 2021 NepstokLeaveaComment on उपप्रमुख कविता विष्टको वार्षिक मोबाइल खर्च ७२ हजार !
५ असोज- बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम सुबिधा बपत लिएका छन् । यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले विभिन्न सेवा सुविधा शीर्षकमा एक वर्षमा एक करोड एक लाख १७ हजार पाँच सय २९ रुपैयाँ लिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतले कुलमानका बारेमा दियो यस्तो आदेश
चार महिनापछि हटाइयो निषेधाज्ञा तर यस्ता नियम भने पालना गर्नु पर्ने ?
बैंकबाट ऋण लिएका र लिन चाहनेहरुलाई दुखको खवर !